Vogele - paver. Ukucaciswa, ukusebenza
umlando Inkampani Vogele ihlala iminyaka engaphezu kuka-150. Le nkampani iye unqobe izithiyo eziningi, akakamtholi ubizo bakhe beqiniso. Kuze 1926, base esikhiqiza imishini embonini ujantshi. Ngemva kwesikhathi bashintshele ukukhiqizwa asphalt pavers.
Isitaki kungokwalabo esigabeni imishini eyinkimbinkimbi futhi kudinga ziqu eliphezulu onjiniyela. imishini ejwayelekile ukwenza imisebenzi ephathelene ne-kubekwa asphalt ukuxuba kanye nokuqondanisa yayo. Omunye iyunithi uyakwazi esikhundleni iqoqo imishini ukusebenza. Odinga isibambi - kwezidingo ngesikhathi esifanele impahla ukusebenza.
Vogele - Umholi imishini umgwaqo wokwakha
Ngemva isifanekiso kuqala ngempumelelo ochwepheshe bacabanga ukuze bathuthukise amakhono abo. Ngo-1950, i-imodeli yasungulwa nge hopper ngoba ukulungele-ukuxuba i-asphalt, ngawo lowo nyaka, imoto sehla yokwakha izimoto eziningi nge Vogele. Asphalt kwaba uhlobo ukuphumelela ukwakha imigwaqo ngesikhathi.
Vogele emakethe namuhla iye zibalwa phakathi imishini alesi sigaba. Le nkampani abasahilelekile enye into ngaphandle ukudalwa nokwenziwa ngcono imishini asphalt, kanye izesekeli ngabo. Ukufika kombuso esebenza ngogesi mobile lapho ingxube sasithola ngokuqhubekayo, ngenxa isidingo yenqubo ezishintshayo. Kungenzeka ukusheshisa kubekwa endleleni ngaphandle kwezindleko ezingeziwe. Eyokuqala ukusebenzisa lolu hlobo uhlelo iye yabhekwa yithi inkampani.
Hhayi okwamanje iyiphi ibhizinisi ezingase ukuncintisana Vogele. Asphalt, adalwe onjiniyela, abhanqiwe nge Element mobile yakha eziyinkimbinkimbi ukuthi ongasebenza autonomously.
Ngaphansi inombolo imodeli 1603-1, inkampani wakhipha ukusetshenziswa jikelele we phiko. Kuyinto efanelekayo ebeka i-asphalt ukhonkolo egandayiwe emigwaqweni, izindlela zokuhamba, endaweni, kanye motorways ne-multi-kwindlela ezibanzi.
Amathuluzi nemishini kungenziwa enikeziwe e ezahlukeneyo eziningana. Njengomthetho, ethandwa kakhulu phakathi komgwaqo wokwakha amabhizinisi kubhekwa model nge screed ifakwe idivayisi kagesi evuthayo futhi isixwayisi ngoba tamping uhlobo ibha emise. Ngaphezu kwalokho kungenzeka ukufaka ezizibeni esikhethekile ukubekwa uphawu ngcono. Kanye iklayenti ipuleti iza wideners ahlukene setha amamitha angu-6.5. Model 1603-1 kuvumela ukwanda amamitha angu-8. Konke okunamathiselwe angathengwa ngokwehlukana kusukela abamele olusemthethweni Vogele. Asphalt ifakwe hopper ihlanganise mayelana 13 amathani ingxube isiqedile. Ngosizo amasilinda wokubacindezela Songa sidewall evumela ukugeleza egcwele impahla.
1800-2 abakhasi asphalt paver esetshenziselwa umsebenzi indaba eningi kakhulu kunezinye inguqulo 1600-2. Kube zingasebenzisa izindawo ezincane, kanye ukwakhiwa ibhayisikili izindlela. Ngenxa imishini umshini abakhasi buqinile engcono phakathi kwazo zonke umugqa Vogele. Asphalt kulula ukugcina futhi uphathe, Yaziwa linokwethenjelwa nekghono nokusebenza okusezingeni eliphezulu. It Lingase lisetshenziselwe njengoba eziyinkimbinkimbi azimele wodwa ngaphandle nezisebenzi ezengeziwe.
Ububanzi esiphezulu ebusweni laying kungaba-9 amamitha. I ukushuba we ungqimba zokhahlamba kusuka 3 kuya ku-30 cm ububanzi umshini kule sikhundla yezokuthutha -. 2.55 m, kanjalo-ke kungenziwa athuthwe usebenzisa i-trailer abangenazo izimvume ezengeziwe kunikeziwe izimpahla besiyoba sikhulu.
1900-2 imodeli kungokwalabo ekilasini ogandaganda abakhulu. Lokhu paver Vogele, okuyinto izici lobuchwepheshe njengabakhulu kunani imingcele efana wokuncintisana izimoto, akalingani namuntu uma ufaka endleleni. Nge actuator wokubacindezela ngoba bakubheka ipuleti extendible enamathela, okungase akha isiqeshana 6 metres pass eyodwa nje. amadivaysi ushiritelnyh Kuncike usebenzise lesi sibalo ongama-8.5 m kungenziwa ngaphezu kwalokho bephethe ezintathu izinhlobo ipuleti Ubukhulu ukusebenza 8.5 .; 9,0 futhi 10 metres, ngokulandelana. rigidity Bezakhiwe kuhlinzekwe yinkampani simiso Umhlahlandlela tube sigaba.
Injongo eyinhloko yawo izinhlaba - udala iphrofayela iphrojekthi ye endleleni kuhambisana nazo zonke izimfuneko ubuchwepheshe. 1900-2 ku izinhlobo ezimbili control izinhlelo esetshenziswa: analog digital.
Okokuqala udinga ukusetha base ebusweni ngentambo eziqondisayo esake embukisweni iqembu abahloli. Uphenyo Special, beya kule string, isilawuli okuhambisa izimpawu ezimayelana ngeziphambeko kungenzeka. Kuye idatha etholwe kuyahlukahluka trajectory kanye esishukumisela paver Vogele. Izimfanelo izinzwa zingahluka ngokuya yalokho okuyinto oyifunayo ukuthola.
Uhlelo lwe-digital lisebenzisa izinzwa ultrasonic kanye laser alinganisa ukuphakama iphuzu. Amapharamitha abasindwayo kusengaphambili ku ukulawula umshini iyunithi. Yonke idatha ziyavumelana unjiniyela omkhulu ngaphambili futhi iqembu abahloli. Lena ukuze kuncishiswe umsebenzi esikhathini esidlule, kanye ukunemba project ukuqaliswa.
Ezokuthutha kanye nokusatshalaliswa izinto
Hopper umthamo amathani 14. Ngesikhathi esifanayo, valve akhethekile ukwenza nokugcinwa umshini. Vogele paver ukulungisa engenziwa ngqo esakhiweni. Ngesikhathi esifanayo ukususa engeyokuqala bese uyishintshele entsha. Le ndlela ukulungisa konga isikhathi, ngaleyo ndlela kuncishiswe umshini Ukuphumula.
Ukuvimbela umonakalo mechanical phezu hopper kuyinto umgodi isiguqo, okuyinto abuts ukuqaliswa olwandle yokulahla khulula.
Intulo augers adingekayo ukusatshalaliswa iyunifomu ingxube, ushintshashintsha izindwani ukusebenza futhi asethwe ukuphakama isihlobo egumbini izisekelo auger.
umshini umugqa Super ihlukaniswe izindlela 13. Iyunithi uyakwazi ukwakha ububanzi band 1.8 kuya 16 m paver Vogele ukusebenza kuhluka 200 1500 t / h.
Le nqubo kungaba kanyekanye ukuqhuba emakhiyubhi enamathela futhi ukusabalalisa ukuxubana asphalt ukhonkolo yonkana ububanzi komgwaqo esizayo, ngemva kwalokho bese ohlangene.
I ethile eyinhloko Vogele imishini ukusebenza kuyinto ephakeme kakhulu izindleko amayunithi. Ukulungisa umshini owodwa izindleko kaningana ngaphandle uhlobo olufanayo lomsebenzi eyenziwa imishini yasekhaya.
Ezimakethe imishini umgwaqo wokwakha bayindlala kakhulu Vogele umshini. Thenga paver kungaba nhlobonhlobo phezu kahle ontengo yakhe yayinqunyiwe, konke kuncike isimo lobuchwepheshe nezinga ukusetshenziswa imishini. Inani lentengo emakethe yesibili kungenzeka elilingana ruble per unit 5.5 million ngo-2006.
Uma kuziwa hardware entsha, imishini ngenxa yokucucuza ecela 19 kwezigidi ezingu 2013. Ngokuphelele umshini omusha kungadla ruble angaphezu kwezigidi ezingu-20.
Izinkampani eziningi zokuhamba akudingeki inemali eyanele ukuthenga paver, likhiphe. Ngokwesilinganiso, kubiza ruble 3 750 ngehora elilodwa wokusebenza, noma 30 izinkulungwane shift. Naphezu izindleko ezifana eliphezulu umshini ezidumile. In ukubuya, inkampani uthola ubuchwepheshe okuthembekile ne ukusebenza kahle eliphezulu kakhulu.
Ugandaganda indoda tgx
Amaloli Toyota Toyoace
Izibuyekezo of the abanikazi MAZ-5440, Ukucaciswa nezithombe umshini
Car "Kia Bongo 3": lobuchwepheshe Ukucaciswa, intengo, izingxenye, izithombe kanye nokubuyekeza of the abanikazi
Kuyini pair plunger? Ukukhiqizwa, ukulungisa, ukukhishwa ukuhlela plunger
Zil-157: Ukucaciswa nezithombe
6 PIT: isikhathi ukugcwaliswa isampula
Ubumnene izinhlobo: incazelo emfushane, izici
Savin Aleksey Yurevich, uLieutenant-General: A Biography. Indlela Yokwenza A. Yu Savin nokubuyekeza ngakho
Ibhizinisi ngaphandle dolobha qala-up - nzima, kodwa kungenzeka
Imidwebo Makovsky: incazelo, isithombe
Indlela ukukhetha Washer ingcindezi ukuhlanza imishini: isilinganiso ukubuyekezwa. ingcindezi Washer ngoba imishini yokuwasha ngezandla zabo
Izindleko ongaqondile inkampani
Ukwelashwa nokuvikelwa lymphadenitis submandibular. lymphadenitis Submandibular ezinganeni: ukwelashwa
Liana for engadini - Kobe: ezikhula imbewu